badri pangeni – Karnalisandesh
Tag: badri pangeni
बद्री पंगेनी र कबिता अर्यालको स्वरमा ‘मेरी छुनुमुनु’ (भिडियोसहित)
काठमाडौँ। लोकप्रिय गायक बद्री पंगेनी र कविता अर्यालको स्वरमा ‘मेरी छुनुमुनु’ बोलको तीज गीत बजारमा आएको छ। नेपाली हिन्दु नारीहरूको महान पर्वका रूपमा मनाई तीजको अवरमा कलाकारहरू गीतका भाकाहरू बजारमा ल्याउने गर्दछन्। यसै क्रममा कबिता अर्याल र बद्री पंगेनीको संयुक्त प्रस्तुती रहेको मौलिक तीज गीत ‘मेरी छुनुमुनु' बजारमा आएको हो। शिव हमालको शब्द संगीत रहेको गीतको संगीत संयोजन विश्वास नेपालले गरेका हुन्।
बद्री र मिलनको आवाजमा ‘बिर्सियौं माया’
काठमाडौँ। लोकप्रिय गायक बद्री पंगेनी र मिलन नेवारको समुधुर स्वरमा ‘बिर्सियौं माया’ बोलको गीत बजारमा आएको छ। गायक पंगेनीको शब्द तथा संगीतमा तयार पारिएको गीत ‘बिर्सियौं माया’ शुक्रबार बिहान गायक पंगेनीकै युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा मायाका कथाहरु समेटिएका छन्। मायाका सन्दर्भहरुमा विगतलाई बिर्सिएका गुनासाहरु गरिएका छन्। मन परेको मान्छेलाई पाउनका लागि जन्मदिने बाआमालाई त्याग्नेहर
काठमाडौँ। चर्चित गायिका पुर्णिमा तामाङलाई लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको मानार्थ सदस्यता प्रदान गरेको छ। राष्टिृय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो २०औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा गायिका तामाङलाई मानार्थ सदस्यताको प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको हो। प्रतिष्ठानबाट सम्मानित भए पश्चात गायिका तामाङले गीत संगीतको क्षेत्रमा अग्रसर हुन थप उर्जा मिलेको र गीत संगित क्षेत्रमा
काठमाडौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको २०औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले प्रतिष्ठानको भवन बनाउनका लागि जग्गा खरिद र भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको बताए। उनले स्व‍. रवीन्द्र अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुँदा रकम उपलब्ध गराएकाले भवन निर्माणको कार्यले पूर्णता पाएको स्मरण गर
‘तिम्रो घरमा मेरो छोरी’ बोलको गीतले उठाएका प्रश्नहरु
काठमाडौँ। सामाजिक जागरणका गीतदेखि देशभक्ति गीतसम्म, देउडादेखि लोकदोहोरी गीतसम्म कहि न कहि जोडिएर आउने नाम हो बद्री पंगेनी। लोकप्रिय गायक पंगेनीले कुनैबेला बिधवा नारीहरुको जीवनकथामा आधारित बेदनाका गीत गाएर शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सन्देश प्रसारण गरे। त्रिशुलीको किनरामा बालुवा चालेर बालबच्चा पाल्नेहरुका गीत गाएर उनले राज्यलाई विपन्नहरुको अवस्था सुनाए। मुताङको स्याउ कुहिदै गर्दा विदेशी स्याउको मूल्य बढ
हमालको नेतृत्वमा ‘विकृति-विसंगति न्युनिकरण कार्यदल’ गठन
काठमाडौँ। नेपाली गीत संगीतमाथि प्रहार हुन थालेको भन्दै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानले असमाजिक कार्यहरु नियन्त्रण गर्न १३ सदस्यीय ‘ विकृति-विसंगति न्युनिकरण कार्यदल’ गठन गरेको छ। सर्जक तथा गयाक शिव हमालेको नेतृत्वमा नव गठित कार्यदलले नेपाली साँस्कृतिक क्षेत्रमाथिको हमला रोक्न के कस्तो काम गर्ला ? त्यो भने हेर्ने बाँकी नै छ। तर, प्रतिष्ठिानले चालेको कदम भने निक्कै सह्रानिय रहेको जानकारहरु
विकृतिलाई टेवा पुग्ने भन्दै रामजी खाँडले हटाए गीत
काठमाडौँ। गीतको म्युजिक भिडियो उत्ताउलो बनेको भन्दै गायक रामजी खाँडले आफ्नो तीजगीत यूट्युबबाट हटाएका छन्। यो वर्षको तीज कोसेली रूपमा ल्याएका ‘सबै राजा, सबै दादा’ बोलको गीत युट्युबबाट हटाएका हुन्। गीतको भिडिओ बढी उत्ताउलो भएको भन्दै आफैंले सेन्सरसीप गरेर हटाएको खाँडले बताए। अहिलेको गीत संगीत बजारमा विकृति बढेको भन्दै आफ्नो उक्त गीतले पनि विकृतिलाई टेवा पुग्ने देखेर हटाएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय ल